एक डाक्टर के हो? शरणार्थी र आप्रवासी लागि जानकारी | USAHello
एक डाक्टर के हो?
एक डाक्टर के हो? डाक्टर कस्तो हो त्यहाँ? तपाईं कुन एक जाना? दयालु यात्रा गर्न डाक्टर वा स्वास्थ्य प्रदायकको जो सिक्न.
एक डाक्टर बिरामी मान्छे उपचार गर्न प्रशिक्षित छ जो एक व्यक्ति छ. अमेरिकामा, त्यहाँ डाक्टर र अन्य चिकित्सा कार्यकर्ता को धेरै प्रकार छन्. अमेरिकी चिकित्सा कार्यकर्ता कल “स्वास्थ्य प्रदायकहरू” वा “चिकित्सा प्रदायकहरू।” यी तपाईं बिरामी वा घाइते हुँदा तपाईं जो मदत मान्छे हो.
डाक्टर कस्तो हो त्यहाँ?
तपाईं आवश्यक पर्दछ चिकित्सा प्रदायक तीन प्रकारका छन्:
1. प्राथमिक हेरविचार प्रदायकहरू
3. आपतकालीन चिकित्सा सेवा
जसले तपाईंलाई आफ्नो स्वास्थ्य समस्या निर्भर हुनेछ मदतको लागि हेर्न.
प्राथमिक हेरविचार प्रदायकहरू (PCPs) आधारभूत प्रदान, दैनिक हेरविचार र साधारण चिकित्सा समस्याको लागि व्यक्तिविशेष र परिवारलाई स्वास्थ्य सेवाहरूको दायरा. तपाईं एक समस्या छ जब एक PCP सामान्यतया तपाईंले देख्ने पहिलो चिकित्सा व्यक्ति छ.
जो एक प्राथमिक हेरविचार प्रदायक हुन सक्छ?
तपाईंको PCP एक डाक्टर हुन सक्छ (पनि अमेरिकामा एक चिकित्सक भनिन्छ), एक चिकित्सक गरेको सहायक वा नर्स चिकित्सक. आफ्नो परिवारको सबै सदस्य एकै PCP देख्न सक्छ, वा तपाईंले आफ्नो स्थानीय स्वास्थ्य केन्द्र मा सबै आधारित मानिसहरूको नम्बर हेर्न सक्छ. तपाईं धेरै वर्षसम्म एउटै PCP देख्न सक्छ.
यहाँ तपाईं आफ्नो परिवार डाक्टर देख्न जब केही उदाहरण हुन्:
एक वार्षिक स्वास्थ्य जाँच-अप लागि
आफ्नो छोरा वा छोरी एक कान संक्रमण थियो भने
जब तपाईं राम्रो महसुस छैन तर यो एक आपतकालीन छैन
तपाईं प्राप्त गर्न आवश्यक छ भने प्रतिरक्षक नागरिकता लागि लागू गर्न
preventative हेरविचार लागि
म एक प्राथमिक हेरविचार प्रदायक कसरी पाउँछौं?
त्यहाँ आफ्नो समुदाय मा एक प्राथमिक हेरविचार प्रदायक हुनेछ. सबैभन्दा समुदाय स्वास्थ्य केन्द्र वा स्वास्थ्य क्लिनिक छ. तपाईं साथीहरू र छिमेकी अनुरोध गर्न सक्छ: “के तपाईं सिफारिस गर्न सक्ने एक डाक्टर छ?”. तपाईंको resettlement कार्यालय वा सल्लाहकार पनि एक परिवार डाक्टर पाउन मदत गर्न सक्छ. वा तपाईंलाई हेर्न सक्छन् FindHello स्वास्थ्य प्रदायकहरू लागि.
आफ्नो स्वास्थ्य बीमा preventative स्वास्थ्य लाभ प्रदान गर्न सक्छ. तिनीहरूलाई प्रयोग गर्ने प्रयास गर्नुहोस्! यी कि स्वास्थ्य समस्या विकास तपाईंले रोक्न मद्दत परीक्षण र अन्य कार्यक्रम छन्. तिनीहरूले आफ्नो स्वास्थ्य जाँच-अप रही समावेश तपाईं बिरामी महसुस गर्छन् भने पनि वा केहि गलत सूचना जारी गरेको छैन. स्वास्थ्य स्क्रीनिंग एक विस्तृत विविधता (परीक्षण) निःशुल्क उपलब्ध छन्. जो स्क्रीनिंग भन्दा स्वास्थ्य बीमा योजना द्वारा ढाकेका छन् पत्ता.
आफ्नो प्राथमिक हेरविचार प्रदायक केही चोट लागेको र रोगहरूबाट लागि एक विशेषज्ञ तपाईं पठाउन सक्छन्. एक विशेषज्ञ शरीर को एक विशिष्ट शरीर सिस्टम वा भाग मा केंद्रित गर्ने स्वास्थ्य प्रदायक हो. जस्तै, एक त्वकरोग छाला हेरचाह गर्नुहुन्छ, एक Gastroenterologist पाचन प्रणालीको लागि परवाह, र एक ओर्थपेडीस्ट हड्डी हेरचाह गर्नुहुन्छ.
यहाँ तपाईं एक विशेषज्ञ हेर्न जब केही उदाहरण हुन्:
तपाईं पेट समस्या, र आफ्नो PCP परीक्षणको लागि तपाईं पठाउँछ
तपाईंको छाला मा एक तिल परिवर्तन आकार वा रंग छ
आफ्नो छोरा वा छोरी बोल्न सुरु भएको छैन
केही विशेषज्ञहरु बस बच्चाहरु वा प्राचीन व्यवहार. विभिन्न बारेमा थप जान्न डाक्टर को प्रकार तपाईं संयुक्त राज्य अमेरिका मा पूरा हुन सक्छ.
विशेषज्ञहरु गर्न सिफारिश
एक सान्दर्भिक एक सिफारिस तपाईं अर्को स्वास्थ्य प्रदायक हेर्न हो (एक विशेषज्ञ, उदाहरण को रुपमा). तपाईं एक विशेषज्ञ हेर्न अघि सान्दर्भिक लागि आफ्नो PCP सोध्न आवश्यक पर्दछ. विशेषज्ञ यो आवश्यक हुन सक्छ वा आफ्नो बीमा कम्पनीले यो आवश्यक हुन सक्छ. तपाईं एक सान्दर्भिक एक विशेषज्ञ संग एक नियुक्ति गर्नुअघि आवश्यक छ भने हेर्न आफ्नो स्वास्थ्य बीमा योजना समीक्षा निश्चित हुन. यसरी तपाईं आफ्नो बीमा भ्रमणको कवर पक्का हुन सक्छौं.
3. आपतकालीन चिकित्सा हेरविचार
आफ्नो परिवार मा कसैले दिन वा सप्ताह भन्दा बिरामी लेट हुन्छ भने के? के तपाईं तत्काल हेरविचार आवश्यक गम्भीर समस्या छ भने? तपाईंको PCP संग एक नियुक्ति बनाउन सम्भव नहुन सक्छ. तर तत्काल मद्दत प्राप्त गर्न अन्य ठाउँहरूमा छन्:
जरुरी हेरविचार र हिंड्न-मा क्लीनिक
जरुरी हेरविचार र हिंड्न-मा क्लीनिक अक्सर साँझ र सप्ताह घण्टा र एक नियुक्ति बिना सानातिना चिकित्सा समस्याको लागि हेरविचार प्रदान. ठेगाना ध्यान, खुला घण्टा, र नजिकै तपाईं कहाँ बाँच्न जरुरी हेरविचार क्लीनिक लागि जानकारी सम्पर्क.
यहाँ तपाईं एक जरुरी हेरविचार कार्यालय भ्रमण हुन सक्छ जब केही उदाहरण हुन्:
एक खेल घटना समयमा, आफ्नो छोरा उनको टाउको हिट
तपाईं एक धेरै खराब खोकी र तपाईं एउटा संक्रमण हुन सक्छ विचार
अस्पताल आकस्मिक विभाग
अस्पताल गरेको आपतकालीन विभाग जीवन खतरामा पार्ने र जरुरी स्वास्थ्य आवश्यकताको हेरविचार प्रदान. सबैभन्दा आपतकालीन विभाग खुला 24 घण्टा एक दिन, सात दिन एक हप्ता. निकटतम आफ्नो घर गर्न स्थान थाहा र आपतकालीन विभाग को जानकारी सम्पर्क निश्चित हुन.
यहाँ लागि अस्पताल जाने जब केही उदाहरण हुन्:
आफ्नो शिशु वा बच्चा भएको सप्ताह मा एक धेरै उच्च ज्वरो छ
आफ्नो पत्नी श्रम मा रहेको छ
आफ्नो पति आफ्नो खुट्टा भङ्ग गरेको छ
यदि आपतकालीन कोठा जाने, यो जीवन खतरामा आपतकालीन छ जबसम्म तपाईं अझै पनि एक डाक्टर तपाईं देखेको गरिनेछ अघि धेरै घण्टा प्रतीक्षा हुन सक्छ.
आपतकालीन चिकित्सा सेवा
कल गर्न फोन नम्बर आपतकालीन चिकित्सा सहायता छ लागि 911.
संयुक्त राज्य अमेरिका आपतकालीन चिकित्सा सेवा को राम्रो सिस्टम छ. यो अस्पताल मानिसहरूलाई लिन प्रशिक्षित चिकित्सा responders र एंबुलेंस द्वारा हेरविचार समावेश. आपतकालीन चिकित्सा सेवा अक्सर प्रहरी र Firefighting विभाग वा काम. कहिले काँही उनि अस्पताल वा निजी कम्पनीहरु द्वारा चलाउन छन्.